Lehilahy maty rehefa avy nodidiana Notriarin’ny havany ny razana nijerena ny taovany
Zokiko izay nodidiana tao amin’ny hopitaly iray tao Vohipeno dia ambarako aminareo namana ato fa nisy tsy tao ny taova rehefa nosavaina ny maty satria tsy mety mino ny sain’ny fianakaviana,
ka nosavaina ny faty alohan’ny handevenana azy, hoy ny fitantarana narahina sary nampivarahontsana tamin’ny tambajotran-tserasera fesiboky. Nambara fa banga tao anatiny ny fo, avokavoka, voany ary mbola noritina ny rany. Na izaho tsy nandalo fianarana aza toa mba mahalala ny resaka atao hoe fahasalamana izany na tsy nandalina ny resaka fitsaboana izany, hoy hatrany ny fanazavana…. Naseho an-tsary moa ny famahana ny zaitra lava be teo amin’ny kibon’ity olona voalaza fa nalaina ny taova ity. Ireo voalaza fa fianakaviany no nilaza sy nanitrikitrika fa nisy taova tsy tao, izay sarotra ny handiso na hanamarina azy, fa kosa tena nampivarahontsana ny sary nivoaka sy niparitaka tamin’ny fanatriarana ilay kibony efa nozairina satria nisy ny ahiahy. Lasa adihevitra ity tranga ity amin’izao fotoana izao. Tena nisy tokoa ve ny resaka fakana ny taova ? Amin’ny ahiahy tahaka izany dia tokony ho naka manampahefana sy mpitsabo ny fianakaviana mba hahafaha-mijery sy tena manamarina ny ahiahin’izy ireo. Andrasana izay mety ho setriny avy amin’ilay hopitaly eo anatrehan’ity toe-javatra ity mba tsy hisian’ny feon-dakolosy tokana. Tokony hisy ihany koa ny fanokafana fanadihadiana lalina ataon’ny manampahefana hahafantarana ny tena marina amin’ny raharaha miteraka resabe sy adihevitra tahaka izao.